Atletisma :: Mila mandranto traikefa any ivelany ireo mpikatroka malagasy • AoRaha
Atletisma Mila mandranto traikefa any ivelany ireo mpikatroka malagasy
Isan’ny taranja tsy nandrombaka medaly ny atletisma nandritra ny Lalao Afrikanina andiany faharoa ambin’ny folo, tany Rabà (Maraoka) farany teo. Atleta efa-bavy no niaro ny voninahi-pirenena tany ivelany.
Nanambara Rakotomalala Tsiry Manantena, tale teknikan’ny Federasiona malagasin’ny atletisma, fa: “faran-tampony ny zava-bitan’ireo atleta malagasy ireny navoakan’izy ireo tany Maraoka ireny”. Nampiany ihany koa fa mila hampidirina any amin’ireo toerana manazatra manokana any ivelany ireo atleta malagasy vao afaka mampivelatra ny fahaizany sy hahazoana vokatra tsara kokoa.
Nahavita ny zava-bita tsara indrindra ihany koa anefa i Nomenjanahary Claudine tany amin’ny sedra-pifaninanana 100m, tamin’ny fe-potoana 11’82 raha 12’ teo aloha. “Efa nampoizina hatramin’ny voalohany ny vokatra. Ny fandefasana azy ireo any ivelany no vahaolana. Any sady araka tsara hatramin’ny sakafon’ny atleta. Fanazarantena fotsiny ihany koa no hifantohan’izy ireo any ivelany”, hoy hatrany ity tale teknika ity.
Baolina kitra- Fifaninanam-paritra :: Hanomboka amin’ny 28 septambra ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga
Baolina kitra – Amboaran’ny CAF :: Mampitandrina momba ny fandehanana any Afrika Atsimo ny minisitera